Otu esi etinye Microsoft Edge na Debian 11 - LinuxCapable
September 15, 2021 August 22, 2021 by Jọshụa James
Wụnye igodo GPG na ebe nchekwa
Wụnye Microsoft Edge na Debian 11
Mepee Microsoft Edge na Debian 11
Na-emelite Microsoft Edge na Debian 11
Wepu Microsoft Edge na Debian 11
Nnenna 11 Bullseye ndị ọrụ ugbu a, na ndabara, bụ naanị na ndị Ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ nke na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe ọzọ ma e jiri ya tụnyere naanị ịgbanwe gaa na. Google Chrome.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Microsoft Edge na Debian 11 Bullseye.
Site na ndabara, curl na-efu na nrụnye desktọọpụ Debian 11; ọ bụrụ na ị maghị, gbaa iwu ahụ agbanyeghị. Ọ gaghị eme ihe ọ bụla.
Nzọụkwụ mbụ ị ga-eme bụ ibudata na igodo GPG, ma ọ bụ ọzọ echichi nke Microsoft Edge ga-emebi.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na nke gị Debian 11 desktọpụ iji meghee ụzọ: Ihe omume > Gosi ngwa > Edge. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
N'ikpeazụ, nbanye na mmekọrịta nhọrọ n'ofe ngwaọrụ dị iche iche. Ọ gwụla ma ịchọrọ nke a, pịa Gaa n'ihu na-abanyeghị, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ ga -eme.
Iji wepu Edge na Debian 11, mebie iwu njedebe ndị a:
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Microsoft Edge Nchọgharị Mail igodo
Otu esi edozi Python 3 Virtual Environment na Ubuntu 20.04